Kheyroow: Banaadir ma bannaankaad ka joogtaa mise waa badbaadinee? – Warfaafiye:
Isha hourmarka, xadaarada iyo astaanta qaranimada waa gobolka Banaadir, inkastoo haddane deegaanku la wada degan yahay ee qaranka ku teedsan yahay inta u dhaxeysa labada webi.
Gobolka Banaadir waxaa ku nool seddax milyan iyo bar oo heysan wax madalaad ah, halka gobolada reer guuraaga iyo qabaa’ilka aan wax soo saarka laheyn ay heystaan madalaad buuxda. Banaadir waa la dulmiyay, magaca dowladda dhexena jiritaankeeda waxa saldhig u ah Banaadir.
Dakhligeeda oo ay ka qadsan tahay waxaa maamula dowlad dhexe oo ku timid madalaada 4.5.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo magacaabistiisa si baqtiyaa nasiib ah u timid ayaa hortaagan inuu qabsoomo shiweynaha dib u heshiisiinta nabadeynta iyo aayaha Banaadir.
Haddii ay sameysato maqaamka iyo madalaada sharciga ah ee Xamar, Kheyre wuxuu ka welwelayaa inay daciifto awooda dowladdiisa, sababtoo ah waxaa dhalaneysa isla xisaabtan ku saleysan ku kala bax awoodaha dowladda dhexe iyo midda maqaamka Banaadir.
Hooyada iyo calosha qaranka waa Banaadir, waxayna naas nuujisaa inta caasiga ku ah oo aan daneyneyn horumarkeeda.
Banaadir wey badbaadee, bulshadeeda ayaana laga rabaa midnimo iyo dib u heshiisiin ay ku dhisaan maqaamkooda qaranimada iyo kooda deegaaneed.
Xamar waxay u dul qaadatay faragelinta siyaasiyiinta galtida ah, la nool nolosha reer guuraagaanimada bidaa’iga ah, awalna taariikhiyan ugu noolaa si barakac ah oo aan ka duwaneyn barakacayaasha maanta Xamar kusoo jabay.
Xamar waxay jiko u tahay oo laga quudiyaa gobolo sheegto maamul goboleedyo iyo siyaasiyiin ku adeegto magaca dowladda dhexe, xag wasiiro iyo baarlamaanba leh.
Guddoomiye Taabit waxaa la gudboon inuu guddiga dhiisha isaaga dhigo welwel la’aan, badbaadada Banaadir, horumarka Banaadir iyo maqaamka Banaadir, waxaa garabkiisa taagan bulshada Banaadir iyo inta deegaanka ku leh labada webi Jubba iyo Shabeelle oo ah mushtamaca doorka weyn ku leh wax soo saarka illane u ah nolosha iyo horumarka Somalia.